कला साहित्य र पत्रकारिताको माध्यमबाट पर्वतलाई अन्तराष्ट्रियस्तर सम्म चिनाउने पन्तको उद्घोष ! – ebaglung.com
कला साहित्य र पत्रकारिताको माध्यमबाट पर्वतलाई अन्तराष्ट्रियस्तर सम्म चिनाउने पन्तको उद्घोष !
२०७६ जेष्ठ २१, मंगलवार १५:१९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
निर्मल पौडेल, पर्वत २०७६ जेठ २१ । पर्वत कलाकार समाजका संस्थापक अध्यक्ष कस्तुप पन्तले कला साहित्य र पत्रकारिताको माध्ययमवाट जिल्लालाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा चिनाउने वताएका छन् । जिल्लाका लोक कला ,साहित्य ,संस्कृति र पत्रकारितालाई संवोधन गर्ने गरि पर्वत कलाकार समाज स्थापित गरिएको र यसै संस्था मार्फत जिल्लालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउने वताएका हुन् ।
पोखरा इन्जोय जोन र नकारात्मक दृष्टिले पारेको प्रभाव !
आजको तस्वीर : बुर्तिवाङमा यस्तो देखियो दलितहरुको भेला !
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७६ असोज ३ । आज गुल्मीमा संविधान दिवस मनाई रहँदा शहिदहरुलाई सम्झीने क्रममा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा १०…